Njikọ mmeri nke Turkish Airlines na Air Moldova
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Njikọ mmeri nke Turkish Airlines na Air Moldova
Air Moldova, onye kacha ibu ụgbọelu na onye na-ebu ọkọlọtọ nke Republic of Moldova, na Turkish Airlines, onye na-ebu ọkọlọtọ mba nke Turkey, kwupụtara mbinye aka nke nkwekọrịta codeshare, dị ka nke 29 Jenụwarị 2018.
Site na mmekorita a nke nkwekọrịta, Turkish Airlines na Air Moldova ga-agbakwunye koodu ụgbọ elu ha na Istanbul - ụgbọ elu Kishinev vv nke ndị abụọ ahụ na-arụ.
“Dị ka Turkish Airlines, obi dị anyị ụtọ na anyị na onye ọrụ ụgbọ mmiri na Air Moldova. Dika anyi nwere nkwado bara uru, anyị kwenyere na, nkwekọrịta a ga-eme ka mmekọrịta anyị dị mma ugbu a ma kwalite mmekọrịta azụmahịa anyị na ọkwa ọzọ. Site na iwebata ụgbọ elu nke njikọ n'etiti ndị ọzọ, ndị njem ga-enwe obi ụtọ karịa njem ndị ọzọ n'etiti Moldova na Turkey site na njikọ ụgbọ elu.
Dị ka Air Moldova, anyị nwere obi a thatụrị na mmekọrịta ogologo oge anyị na Turkish Airlines ga-ebuli elu na ọkwa ọhụrụ site na mbinye aka nke mmekọrịta mmekọrịta a. Anyị nwere ekele dị ukwuu maka imekọ ihe ọnụ a ma kpebisie ike iji ya mee ihe n'inye ndị ọzọ ihe ngwọta njem. Anyị na-atụ anya inye nkwado na gburugburu azụmahịa nke Moldova na Turkey na mmezu nke ọrụ ntinye ego ha na mba abụọ ahụ. ” Iulian Scorpan, Onye isi nchịkwa nke Air Moldova kwuru.
Na mbu, ndi agha abuo a gha edobe koodu ha na Istanbul - Kishinev vv flights ndi ozo. Enwere ike ịtụnye ihe karịrị isi na / ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ dị ka agba nke abụọ mgbe ebidochara nkwekọrịta codeshare a. Flightsgbọ elu ndị ga-ejikọ ọnụ ga-enye ndị ahịa na-ahapụ Istanbul, nnukwu obodo Turkish yana ọdụ ụgbọ elu dị mkpa na mpaghara ahụ, na Kishinev. Ọzọkwa, na-eburu n’usoro usoro arụ ọrụ nke usoro iheomume nke ndị na-ebu ya na nkwekọrịta na-arụkọ ọrụ ọnụ; ọ ga - eme ka ndị ahịa ụgbọ elu abụọ nwee ọ connectụ na enweghị njikọ na mpaghara ha dị iche iche.
Turkish Airlines, na-efega ọtụtụ mba na mba ndị ọzọ karịa ụgbọ elu ndị ọzọ n'ụwa, na-arụ ọrụ ugbu a karịa ndị njem 300 na njem mba ụwa na mkpokọta, na mba 120. Air Moldova, n'aka nke ya, na-enye njikọ dị mkpụmkpụ ma dị mfe na ọdụ ụgbọ elu Chisinau na-apụ kwa ụbọchị gaa ebe 30 na Europe, Russian Federation na Middle East.
Oge Ochie Na-ezube na Hotels 100 na Pan-India Roll Out
Hotellọ nkwari akụ Malaysia: New World Petaling Jaya Hotel